दशैँमा घर जाँदै हुनुहुन्छ ? सरकारले गर्यो यस्तो अपिल — Sanchar Kendra
दशैँमा घर जाँदै हुनुहुन्छ ? सरकारले गर्यो यस्तो अपिल
काठमाडौँ । सरकारले लकडाउन अन्त्य गरेसंगै पछिल्ला केहि दिनयता नेपालमा कोरोना सक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढेको छ। नेपालीहरुको महान चाड बडा दशैं तथा तिहार नजिकिदै गर्दा कोरोना महामारीको जोखिमलाइ मध्यनजर गर्दै सरकारले अपिल गरेको छ।
उनले कोरोना आफैँ नसर्ने भएकोले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउन पनि भनेका छन्। उनले भने, ‘कसैलाई भेट्नै परे सामाजिक दूरी कायम गरौँ। जेष्ठ नागरिकलाई भेट्न परे दूरी राखेर भेटौँ। अंकमाल गर्ने नगरौँ, बुढा बुढीले प्रयोग गर्ने सामान सफा गरौँ, औषधी र खानपानको विशेष ख्याल गरौँ ।’
कोरोना भाइरस नेपालः प्रजिअहरू भन्छन्, काठमाण्डू उपत्यकामा निषेधाज्ञा यी कुरामा निर्भर गर्नेछ
काठमाण्डू उपत्यकामा पछिल्लो समय कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहँदा फेरि निषेधाज्ञा जारी हुन्छ कि भनेर कतिपयले आशङ्का गर्न थालेका छन्। पछिल्लो समय देशभरि फेला पर्ने कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितमध्ये आधा जति काठमाण्डू उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाण्डू, ललितपुर र भक्तपुरका हुने गरेका छन्।
ललितपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललितकुमार बस्नेतले सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने कार्यालयहरूमा भिडभाड भई कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण फैलिन सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा जारी सेवा स्थगित गर्ने निर्णय गरिएको बीबीसी न्यूज नेपालीलाई बताए।
भक्तपुरकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले पनि सङ्क्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि कार्तिक २ गतेबाट अत्यावश्यक बाहेकका सेवा प्रवाह बन्द रहने बताइन्।
निषेधाज्ञाको सम्भावना छ?
हुन त यसअघि नै सङ्घीय सरकारले सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या पाँच सयमाथि भए अवस्था हेरी निषेधाज्ञा जारी गर्ने अधिकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई दिइसकेको छ। तर अधिकारीहरूका अनुसार सङ्घीय सरकार पनि प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने भएकोले काठमाण्डू उपत्यकाको हकमा निषेधाज्ञाबारे उसको पनि सरोकार हुने गरेको छ।
काठमाण्डू र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू तथा ललितपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीका अनुसार हालका लागि निषेधाज्ञा जारी गर्ने विषयमा कुनै निर्णय लिइएको छैन। यद्यपि फेरि पनि निषेधाज्ञा जारी हुने वा नहुने कुरा केही विषयमा निर्भर गर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
“कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित हुनेहरूको सङ्ख्या बढ्दै गयो र त्यसले विकराल रूप लिन थाल्यो भने फेरि निषेधाज्ञा जारी गर्ने अवस्था हुन सक्छ,” भक्तपुरकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले भनिन्। यसअघि काठमाण्डू उपत्यकाका तीनवटै जिल्लाले एकसाथ समान समयावधिका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेका थिए।
“सङ्घीय राजधानीसँग जोडिएको पनि कुरा हो। एउटा जिल्लाले गरेपछि बाँकी दुइटाले पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसकारण नेपाल सरकारले हामीलाई कस्तो खालको निर्देशन दिन्छ त्यसमा पनि निषेधाज्ञा निर्भर गर्छ,” उनले थपे।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार रेम्डेसिभिर नामक औषधिको कोभिड-१९ उपचारमा प्रभावकारिताबारे गरिएको क्लिनिकल परीक्षणमा बिरामीको स्वास्थ्यमा त्यसले खासै कुनै सुधार ल्याउन नसकेको पाइएको छ। फाइन्यान्शल टाइम्समा प्रकाशित विवरणमा डब्ल्यूएचओले यो नतिजाले उक्त रोगको उपचारमा विद्यमान उपलब्ध औषधिहरूको प्रयोगको आशामा धक्का लागेको बताएको छ।
र रेम्डेसिभिर औषधि निर्माता कम्पनी गिलियड साइन्सेसले प्रतिक्रिया दिँदै उक्त परीक्षणको आँकडा मिल्दो नदेखिने दाबी गरेको छ। सो अध्ययनबाट कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकिनेमा पनि उसले संशय व्यक्त गरेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले कोभिड उपचारका लागि लिएका औषधिमध्ये रेम्डेसिभिर पनि एक थियो।
रेम्डेसिभिरको विकास इबोलाको उपचारको लागि गरिएको हो। यो एन्टीभाइरल औषधि हो र यसले शरीरमा भाइरसलाई बढ्न चाहिने एन्जाइमलाई निष्क्रिय बनाउँछ। एप्रिलको अनुसन्धान नतिजापश्चात् विश्वभरि नै अस्पतालहरूले कोभिडको उपचारमा रेम्डेसिभिरको प्रयोग गर्दै आएका थिए।
कोरोनाभाइरसको विश्वव्यापी महामारी सुरु भएपछि यसविरुद्ध प्रयोग गर्न सकिने पहिलोमध्येको औषधिको रूपमा रेम्डेसिभिरको उपयोगिता पत्ता लागेको थियो। पछि जुन महिनामा ब्रिटेनमा गरिएको अनुसन्धानमा सस्तो र सुलभ रूपमा पाइने डेक्सामेथासन नामक स्टेरोइड औषधिले कोभिडबाट ज्यान जोगाउन सक्ने पाइएको थियो।
कोभिडका कारण गम्भीर अवस्थामा पुगेका बिरामीमा अहिले डेक्सामेथासनको धेरै प्रयोग हुने गरेको र यसले धेरैको ज्यान जोगाइरहेको बताइन्छ।